५० लाखमा अनमोलले साइन गरे नयाँ फिल्म ! « Ramailo छ
५० लाखमा अनमोलले साइन गरे नयाँ फिल्म !
युवा स्टार अनमोल केसी निर्देशक मिलन चाम्स र निर्माता सुदिप खड्काले निर्माण गर्ने नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भएका छन् । अनमोलले यो फिल्मबाट सर्वाधिक महंगो पारिश्रमिक समेत लिएका छन् ।
दुई पक्षबिच पारिश्रमिक रकम बाहिर नल्याउने सहमती भएतापनि श्रोतका अनुसार मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने फिल्मबाट अनमोलले पचास लाखको हाराहारीमा पारिश्रमिक बुझेका छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कुनै पनि स्टारले लिएको यो सर्वाधिक महंगो पारिश्रमिक हो ।
यसबारे अनमोल पिता भुवन केसीसँग बुझ्दा उनले दुई पक्षबिच पारिश्रमिक खुलाउन नमिल्ने सम्झौता भएको बताए । ‘यसबाट अनमोलले कृ को दोब्बर भन्दा बढी पारिश्रमिक पाएको छ’, भुवनले यति मात्रै भने । झरना थापाले निर्देशन गर्ने ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट पनि अनमोलले ३५ लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएको चर्चा छ ।
‘कृ’ मा अनमोलले २० लाख पारिश्रमिक लिएका थिए । ‘कृ’ को दोब्बर भन्दा बढी भनेपछि अनमोलले चाम्सको फिल्मबाट पचास लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएका छन् । चाम्स र खड्काले अनमोललाई लिएर फिल्मको सम्पूर्ण छायाँकन विदेशमा गर्ने योजनामा छन् । प्रदीप भारद्वाजको लेखन रहने फिल्म लभ स्टोरी जनराको बन्नेछ । यसअघि उनीहरुले नायक प्रदीप खड्कालाई लिएर लिलिबिली बनाएका थिए ।